Nwa akwụkwọ Mmụta | BLI
Inyere gị aka ịchọta ebe dị mma ị ga-ebiNwa akwụkwọ ụmụ akwụkwọ
LIKE LIKE LOCALNK RESKPUDR. INWETA
Ulo obibi bụ nhọrọ maka ụmụ akwụkwọ ndị nwere onwe ha na nzuzo nke ibi naanị nke ha. Ga-enwe ụlọ nkeonwe ma ọ bụ nkekọrịta, dịka arịrịọ (s) gị si dị. Dabere na nhọrọ ahọpụtara, a ga-ekerịta kichin, ụlọ ịsa ahụ na ebe ịsa akwa maka ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ. Kwesiri idobe ọnwa 2 - ọnwa atọ tupu ebido - ebe ọ bụ na ntụpọ ndị ahụ pere mpe ma enwere ike ịgba akwụkwọ maka ọnwa 3 ma ọ bụ karịa.
Typedị ebe obibi a bụ naanị maka ụmụ akwụkwọ gbara afọ 16+.
Dị n'ime ebe dị anya site na ụlọ akwụkwọ praịmarị anyị, evo bụ nhọrọ dị elu ma mepere emepe maka ụmụ akwụkwọ chọrọ ịmịpụta ihe n’ehihie ma nwee ezigbo ọ realụ n’abalị. evo Ezubere ya maka ụmụ akwụkwọ, wee gosipụta ihe ndị mepere emepe n'ọnọdụ ndụ dị egwu, nke enweghị ọnụ na ndụ obodo niile.
evo dị nso n’etiti obodo, ọdụ ụgbọ mmiri Old, Lachine Canal na njem nlegharị anya na ọdịnala ndị ọzọ. Ọtụtụ ogige ntụrụndụ na oghere ndị nwere oghere dị n'akụkụ a na-agafe agafe. You ga-enwetara ohere ịbanye na Metro.
Can nwere ike ịnụ ụtọ evo si gamelọ egwuregwu, sonye ndị enyi ọhụrụ n'ụlọ ezumike ma ọ bụ kichin, ma ọ bụ zoo n'oge ezumike n'ụlọ ime ụlọ ma ọ bụ ụlọ oriri na ọ .ụ .ụ. Nwekwara ike iti mgbatị ahụ, gaa igwu mmiri ma ọ bụ were klaga yoga iji mee ka ahụ dịrị gị mma, gaa n'ọbá akwụkwọ, ụlọ nyocha kọmputa, ebe ọmụmụ ihe na ebe obibi iji nọrọ na klas gị.
Lọ otu ma ọ bụ nnwekọrịta
Ime ụlọ jụrụ oyi ma nwee ụlọ
State nke nka nka emeghe 24/7
Bido ebe a na-asa aru na kichin zuru oke
Ime ụlọ a na-ewe iwe dị ọkụ
Ime ụlọ akwa ($$)
Wi-Fi na USB efu
Okpomọkụ, mmiri ọkụ, na ọkụ eletrik gụnyere
Ihe omume ọha
Nche 24 / 7